URHONJ MARGARET JOSEPHS ULINGANISA UKUBANJWA KUKAJEN SHAH - IINDABA
Ngexesha lokujonga okwangoku Bukela okwenzekayo ngokuPhila , Oomama bokwenyani baseNew Jersey UMargaret Josephs kusindwe ngomnye umntu Oomama bokwenyani beSalt Lake City inkwenkwezi UJen Shah ukubanjwa. Bendihlala ndicinga ngeSalt Lake City, kwaye ngoku ndithe phithi, uJosephs wakhankanya. Ndothukile malunga nayo yonke imeko kwaye ndiyakholelwa ukuba iluphu. Ngokwenene iluphu. Ndiyakholelwa kuTwitter wakhe, wathini, ‘UTeresa [Giudice] uhambe ukuze ndibaleke?’ Kusemthethweni ngoku.
Uqala nini umhlola?
Emva komboniso: U-Elizabeth Perkins Uthetha ngoKrwala kwakhe kuTom Hanks | WWHLNgexesha loMboniso emva, uElizabeth Perkins uthetha ngokusebenza noTom Hanks kwiBig, esithi unomdla omkhulu kuye kwaye uMargaret Josephs uxelele umbukeli ukuba unetyala kuJennifer Aydin. ► ► Bhalisa kwiWWHL: bravo.ly/WWHLSub ► ► Bukela iziqendu ezigcweleyo: bravo.app.hyperlink / WatchWhatHappensLive-YT Bukela iWWHL nge-Sun-Thu 11 / 10c: IWWHL Website: bravotv.com/watch-what-happens-live Landela I-WWHL: twitter.com/BravoWWHL…2021-04-08T02: 44: 02Z
NgoLwesibini, nge-30 kaMatshi, u-Shah kunye nomncedisi wakhe, uStuart Smith, babanjiwe emva kokuba umntu ngamnye etyholwa ngokwenza iyelenqe lokwenza ubuqhetseba ngocingo kunye nokuxhaphaza imali ngokusebenzisa inkqubo yorhwaphilizo yokuthengisa ngomnxeba. Iskimu bekusithiwa siqhubeka ukusukela ngo-2012 kwaye sijolise kwabo baneminyaka engaphezulu kwama-55 ubudala, ngokusekwe kwi upapasho ndaba zekhampani evela kwiSebe lezoBulungisa kwiOfisi yegqwetha lase-U.S. kwiZithili eziseMazantsi eNew York.
Abanye 'Oomama Bokwenene Bokwenene' Baye Balinganisa Ukubanjwa kuka-Shah
UMargaret Josephs ayinguye Oomama bokwenene inkwenkwezi ephawule ngokubanjwa kukaShah ngoku. Ngexesha lokujonga kuka-Epreli 6 I-Realitea kunye noDerek Z, yangaphambili Oomama bokwenyani bommandla weOrange County Ilungu lokuphosa UTamra umgwebi wambetha u-Shah njengesidenge. Ngelixa ubonisa ipodcast, iJaji ikhankanyiwe, Ukuba unokwenza izinto ezingekho mthethweni, usisidenge, kwaye xa usenza izinto ezingekho mthethweni kwaye uqhubeka nokubonisa uqobo, uluhlobo oluthile lwesidenge. Kutheni usiya kumabonakude okwenyani xa usenza izinto zasentolongweni? Ucela nje ngokulula.
UAndy Cohen ukongeze ingxelo nge Oomama bokwenyani beSalt Lake City Isikhalazo senkwenkwezi ngo-Epreli 5 isiqendu yerediyo yakhe, Radio uAndy. Oy vey, uCohen ukhankanyiwe. Ndikulungele ukubona indlela eqhuba ngayo. Akukho nto ndinayo ukuze ndongeze kwinto esele siyazi, ngaphandle kokuba ndiyathemba kwaye ndiyathandaza ukuba kungabikho nyaniso.
UJen Shah khange aThule oko wabanjwa
-Jane Intliziyo (@Jane_Herz) Epreli 3, 2021
Oko wabanjwa, uJen Shah khange ahlale ethe cwaka. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, u-Shah uphinde wathumela imiyalezo emininzi evela kubalandeli bakhe kwiintsomi zakhe ze-Instagram, uninzi lwabo lufunda iJen yasimahla.
Nge-2 ka-Epreli, u-Shah uphinde wathumela umfanekiso wakhe kumlandeli ofunda, iJen yasimahla. Kwiphepha lokuqala lomfanekiso, u-Shah ubhale wathi, Enkosi ngokunyaniseka, ukukholelwa kum, kwaye ungaze ukholelwe uhanahaniso. Olu hambo lundiqinisekisile ukuba ngoobani amaqabane am okwenyani. Lonke uthando lwam #ShahSquad. Inkqubo ye- Oomama bokwenyani beSalt Lake City Inkwenkwezi yongeze iifilimu zakhe esitya kwiindawo zokutya kunye nokucula kwimoto yakhe.
U-Shah akalixhasi uxanduva lweendleko, kunye nomncedisi wakhe, uStuart Smith. Ngethuba lokumiswa kuka-Shah ngo-Epreli 2, ukhetho longeze ukuba u-Shah angamiselwa kwi-bond eyi-1 yezigidi yabucala. Oomama bokwenyani beSixeko seSalt Lake Inkwenkwezi inokuba neeveki ezimbini ihlawula imali engama- $ 250,000 okanye ibond yepropathi kwaye ivumelekile ukuya e-Utah, New York, naseWashington, DC ukuya kunye nengcali yakhe yezomthetho.
Izigaba: Inetflix Hollywood Iindaba
Ikrisimesi kunye neendawo ezithandekayo zokufota
Ngaba ii-starbucks zivaliwe ngepasika
chanel unxweme olusentshona jonga
ixesha lokuqalisa 2 amazon prime
Imifanekiso yosapho michael buble